Ndepụta nke ụdị osisi apụl kachasị mma maka mpaghara Moscow - Akpan osisi Apple na mpaghara Moscow - 2020
Kasị akwụkwọ apple dị iche iche maka mpaghara Moscow
Mmadụ nwere ike ịkwadebe gị onwe yasite n'ime ka ọ ghọọ nkuku maka ntụrụndụ.
N'ime okike paradaịs a maka mkpụrụ obi, osisi ndị mara mma ga-enyere aka - osisi apple osisi, nke na-anọchite anya ụwa nke osisi apụl pụrụ iche.
Ugbu a, anyị na-atụle ụdị osisi ndị a dị iche iche ma kọwaa ihe kachasị mma maka ịkụ ihe na mpaghara ndị dịpụrụ adịpụ na nso Moscow.
Apple osisi bụ kolonovidnaya. Iche iche nke mpaghara Moscow - mma mara mma honey
Ụwa nke ọganihu na nkà na ụzụ nke oge a adịghị ada. Kwa ụbọchị ihe na-egosi anyị ọhụrụ na mbụ. Nke a metụtara akụkụ nile nke ndụ anyị. Oge zuru oke na ọtụtụ ọrụ na-ekpebi ọnọdụ ọ bụla pụrụ iche. Onye ọ bụla chọrọ ịhazi ohere dị nso ya dị ka ihe dị mma ma ọ bụrụ na ọ dị mfe maka ndụ. O nwere ike ịbụ onye ọ bụla, n'ihi na mkpụrụ obi agaghị amalite ntakịrị ubi ubi.
Ọrụ na ikuku dị elu na-enyere aka ịgbanahụ nchegbu nrụgide, nsogbu kwa ụbọchị, mgbe ị na-enweta ọtụtụ obi ụtọ na fanye batrị gị maka ihe ndị ọ rụpụtara ọhụrụ. N'isiokwu anyị, anyị ga-ekwu banyere otú ọ ga-esi dị mfe dị ka o kwere mee, ruo ogologo oge, iji nweta obere ogige, ebe ọ na-arụ ọrụ nke ọma na-eji obere oghere.
Ruo ogologo oge, ndị ọkà mmụta sayensị agbasiwo mbọ ike iji nweta osisi osisionye ga-ewe obere oherema ha ga-enye mkpụrụ kachasị elu ga-ekwe omume. Chee echiche, eche echiche ma nwee ihe ịga nke ọma. N'ihi okuku zuru oke, ka ndi mmadu huru ihe ndi mmadu huru n'anya, enwere otutu osisi columnar, nke bu kwa ubochi a puru icuta uzo, cherị, piich, pears, na apple osisi. Osisi ndị a dị ngwa ngwa nweta ọtụtụ ndị mara mma n'etiti ndị na-elekọta ubi n'ụwa nile.
Taa, anyị ga-ekwu okwu banyere ụdị osisi dị iche iche dị iche - mkpụrụ osisi apple. Otu ụdị apụl nke nwere oke okpueze dị otú ahụ na-adọrọ mmasị ma dị iche iche pụtara kpam kpam site na mberede, dị ka nke ngbanwe nke okike.
N'afọ 1960, otu onye na-elezi anya nke ọma na Canada, otu Vazhek, hụrụ alaka ụlọ na osisi apụl nke Macintosh dị iche iche nke na-adịghị yiri alaka ndị ọzọ. Alaka a dị nnọọ iche na ndị ọzọ n'ọdịdị ya. Maazị Vazhek chịkọtara ya, wee họrọ ụdị mkpụrụ osisi ọhụrụ dị iche iche. Ya mere, Macintosh Wazhek apple varieties dị - ọ bụ nke mbụ dị na columnarpụtara n'etiti osisi ndị a mara mma.
Ọ dịla adị ọtụtụ ụdị apple iche bụ kolonovidnoy, mana anyị chọrọ ikwu banyere ụdị dị iche iche maka mmepe na mmepe n'ubi dị iche iche nke mpaghara Moscow, ebe a na-ahụ ọnọdụ a site na ọnọdụ ihu igwe ya na ọnọdụ ụfọdụ, nke chọrọ ọpụrụiche maka ịhọrọ osisi na nhazi ha.
Ọrụ kpọmkwem na otu osisi ga-esi gbanye mgbọrọgwụ n'ógbè ọ bụla na-ada site na iche iche nke ụdị ọ bụla, nke gụnyere, otú osisi si anabata oyi, okpomọkụ, pests na ọrịa, nakwa otú o si agba mkpụrụ n'okpuru ụfọdụ ọnọdụ. Ka anyi biri na osisi kachasi nma maka ọnọdụ nke mpaghara Moscow.
Na oge anyị, mkpuru osisi na-eme ka anyị nwee obi ụtọ na ọdịdị dịgasị iche iche ha. Osisi apụl adịghị iche. Ndị na-elekọta ubi niile maara na e nwere ọtụtụ apụl dị iche iche n'ụwa. Ha dị iche na uto na mkpụrụ nke mkpụrụ osisi, na-eto eto na ibu.
Dịka ọmụmaatụ, dị ka okwu nke chara chaa, a na-ekewa apụl n'ime atọ buru ibu. Ọ bụ ụdị okpomọkụnke na-enye ihe ubi n'etiti etiti oge okpomọkụ, ụbịa iche - inye owuwe ihe ubi n'oge ọdịda na ụdị oyi - nke chara n'onwe na mbubreyo mgbụsị akwụkwọ ma chekwaa ruo oge ọzọ. Site n'ikesa n'ụzọ ziri ezi ụdị osisi atọ a dị n'ubi gị, ị nwere ike ịkụ apụl apụl n'ụlọ niile n'afọ niile.
Otu n'ime ihe ndị dịkarịsị iche iche nke osisi applearị, nke kachasị mma maka ịmalite na ebe ndị dị na Moscow bụ: ụdị di iche iche nke Medok, Onye isi, nke mepụtara na ọkara nke abụọ nke ọnwa August; cultivar "Vasyugan", "Gin" na "Titania", nke chara na oge mgbụsị akwụkwọ; iche "Bolero", "Arbat", "Moscow Necklace", nke na-amasị ya na mkpụrụ osisi na-amị mkpụrụ na-enwe ike ịnọgide ruo mgbe February. Ihe niile e depụtara na-anabata mmeri ndị Russian obi ọjọọ, na-eguzogide ọgwụ na ọrịa na pests, na-enye ezigbo owuwe ihe ubi.
Ihe kacha mma maka mpaghara Moscow: "Arbat", "Vasyugan", "Gin", "Titania", "Medoc", "President", "Moscow Necklace", "Bolero"
Ọ bara uru ilebara onye na-elekọta ubi anya na, na mgbakwunye na anya nke a na-ahụkebe, ihe ndị a dị iche iche nke osisi applear, n'ihi ntakịrị osisi ha, na-eji nke ọma mee ihe n'ime mmepe ntụrụndụ dị ka nhazi ihu ala onwe-gi
Na mgbakwunye, ọ bara uru icheta nhazi pụrụ iche osisi nke osisi apple osisi n'onwe ha, nke di iche iche maka nghọta anyi osisi nwere ogwe akpọrọ - isi, na alaka ndị gbara ya gburugburu, nke nwere nnukwu mkpụrụ osisi apụl, nke yiri ka ọ na-agbanye gburugburu centimita ọ bụla. N'oge oge nke mkpụrụ osisi, alaka nke osisi ahụ dị na mbara igwe na-ahụ anya, nke yiri ihe dị iche iche nke ihe owuwu - nke bụ ogidi, nke ha si na ya wepụta aha ha.
Ọ bụghị ihe nzuzo na apụl bụ otu n'ime mkpụrụ osisi na-atọ ụtọ ma dị mma, ahụike dị njọ. Mmadụ ole na ole na-adịghị eri apụl. Mkpụrụ nke mkpụrụ a nwere ọtụtụ nri na vitamin, n'ihi ya, a na-eji ya eme ihe maka nkwadebe ụdị mkpụrụ osisi dị iche iche maka ụmụaka na juices. Mana ekwesiri ighota na, dabere na osisi apụl dị iche iche, uto na àgwà nke mkpụrụ osisi ahụ dị nnọọ iche n'etiti onwe ha. Ya mere, ịkwesịrị ịmara njirimara nke mkpụrụ nke mkpụrụ ọ bụla.
Nkọwa nke mkpụrụ osisi ga-enwe ike ịmalite site na mkpụrụ osisi okpomọkụ: "Medoc" na "President." Mkpụrụ nke ọkwa "Medoc" dị iche iche site na agba odo odo a na-akpọ ya ma nwee ihe na-egbu maramara, ụtọ, uto mmanụ aṅụ. Mkpụrụ ahụ nwere nsụgharị etinyere etiti mkpụrụ osisi na-akpụ akpụ, na-eru ihe dị ka 100 -250 grams. Ha kacha mma maka canning ma mee mkpụrụ osisi mịrị amị. Mkpụrụ mkpụrụ osisi nke "President" dị iche iche nwere ihe dị ka 140 - 250 grams. N'otu oge ahụ, agba ha na-acha odo odo, odo-acha akwụkwọ ndụ na-acha odo odo-acha odo odo anya. Mkpụrụ osisi na -eme gburugburu ya na ihe ụtọ dị ụtọ, nwere ezigbo mkpụrụ osisi grap pulp.
Ọdịiche "Vasyugan" nwere mkpụrụ osisi na-acha uhie uhie na-acha akwụkwọ ndụ ndo nakwa nke ọma nke ọma-grained ọdịdị nke pulp, ụtọ-utoojoo na uto. Nke kachasị mma maka iji ya mee ihe.
Ọdịiche "Gin" nwere mkpụrụ osisi uhie na-egbuke egbuke na-eru ihe dị ka gram 200. N'otu oge ahụ, mkpụrụ osisi nwere ụtọ na uto uto ma bụrụ ihe siri ike nke anụ ahụ siri ike.
Ọdịiche "Titania" nwere mkpụrụ osisi na-acha uhie uhie nke dị ntakịrị ibu, ihe dị ka gram 110. Mkpụrụ dị iche iche site na ụtọ ụtọ mmanya na anụ ọcha.
Dịgasị iche iche "Bolero" O nwere mkpụrụ osisi buru ibu, ihe dị ka gram 200 nke dị arọ na nke ọcha, ma ọ bụrụ na ọ bụrụ na ọ bụ nnukwu ihe ọṅụṅụ. Ha nwere akpụkpọ anụ na-acha akwụkwọ ndụ.
Kpido "Arbat" Ọ bụ ama maka mkpụrụ nke agba aja aja, nke nwere ihe dị ka gram 110, nke a na-adịghị echekwa ruo ogologo oge, mana ọ na-ere ọkụ ọhụụ, na ụdị ya dị mma.
Ụdị "Moscow Necklace" Ọ bụ mkpụrụ nke nnukwu nnukwu ihe dị ka 250 grams nke ọ bụla dị iche iche, na-acha edo edo na-acha ọbara ọbara na-esi ísì utọ na ọmarịcha mkpụrụ.
Ya mere, dị ka apụl na-acha uhie nsị na-ebute ngwa ngwa site na mmepụta ihe ọkụkụ ọdịnala, nke a ga-eme ka ị kpọọ onwe gị seedlings n'afọ ole na ole.
Ugbu a, ịmara ụdị mkpụrụ nke klaasị ọ bụla, ọ ga-adị nnọọ mfe iji chọpụta mkpa ha.
Osisi nwere otutu osisi mara mma ma mara mma ke uwa. Ya mere, ha na-ewu ewu ọ bụghị naanị dịka osisi mkpụrụ osisi, ha na-ejikwa ha mee ihe na gburugburu ebe obibi. Dị ka ha na-ekwu, ọ dị mma maka ihe kpatara ya, na mfe na bara uru.
Otu ihe dị iche iche nke osisi columnar bụ okpokoro gbara agba na internodes, nke dị mkpụmkpụ. N'ihi uto dị otú ahụ, akwụkwọ osisi dị n'akụkụ osisi ahụ dị nnọọ nso n'ebe ibe ha nọ, nke bụ ụdị nnukwu akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, nke mara mma ma mara mma.
A na-akpụ osisi na-amị mkpụrụ n'elu osisi na Ome shortened mpụta alaka. A na-emepe okpueze kọmpụ site na Ome na-esi n'otu nnukwu n'akuku si na mkpịsị aka - nke a na-enye ohere nnukwu osisi nke osisi columnar n'elu ala.
N'ilebara anya osisi apple tree n'onwe ya, ihe di iche iche nke uzo ya n'egbuputa anya. Osisi a dịgasị iche iche enweghị okpukpu okpueze a na-akpọ ndị na-elekọta ubi. Na-agụnye isi, okpokoro kpụkọrọ ọnụ nke na-ekpuchi ya na obere mkpụmkpụ dị mkpirikpi, na njedebe ya, na mmiri, ọtụtụ inflorescences fatịlaịza.
E mesịa, ha nkịtị kpuchie ya na mkpụrụ osisi apụl. N'ihi usoro a nke osisi, o nwere ntakịrị nha, ma n'otu oge ahụ, enwere oke mkpụrụ. Ihe a pụrụ iche nke osisi ebube ndị a, na-enye gị ohere ịkụ n'ubi gị ọtụtụ ụdị dị iche iche nke apple, nke mkpụrụ osisi ahụ, na-eto, na-eto nanị, ma nke a kwesiri aha - "Kolonovidnye apụl".
Ihe mgbaàmà nke osisi na-adịsi ike, ya mere, ha abụghị ndị na-ebute ihe ọjọọ omenala ahịhịa ndụ. Kedu ihe ga-ekwe ka afọ ole na ole nweta osisi ha nke osisi ndị a, ma kụọ ha ha n'efu.
Dị ka ihe kachasị mma nke osisi mkpụrụ osisi nke applear apple onye kwesiri iburu n'uche oke nkpuru nke ihe ndia. Nke ahụ bụ, n'agbanyeghị akụkụ nke ọ bụla nke osisi ọ bụla nke apple apple, ọ na-enye mkpụrụ dị elu. Ọzọkwa, inwe usoro ihe owuwu a kọwara n'elu, na-enye gị ohere igbanwe nchịkọta nke ndị tozuru etozu site na ngosi nke usoro acrobatic na ụzọ nrịba nke dị ize ndụ nye onye na-elekọta ubi, ka ọ bụrụ ihe oriri dị ụtọ, ma na-enye gị ohere ịnụ ụtọ ọrụ nke ọrụ gị.
Mkpụrụ osisi ndị a dị iche iche site na iche iche site na nnukwu uto nke mkpụrụ osisi, nke na-eme ka o kwe omume iji ha na ihe niile o kwere omume nke ịkwadebe na iwe ihe mkpụrụ nke apple osisi. Na mgbakwunye na njirimara ndị a kpọtụrụ n'elu n'elu osisi apple trees, ọ gaghị ekwe omume ichezọ nkwụsị ha na-eguzogide ihu igwe oyi n'oge oge oyi na nkwenye siri ike nye pests na ọrịa ndị dị iche iche.
Niile osisi columnar bụkwa ihe atụ mara mma maka ogige ma ọ bụ ogige a ma ama nke ị nwere ike ịmepụta mara mma oke ma obu uzo di ebube.
Ọ bụrụ na i lee anya n'ụzọ zuru ezu, mgbe niile, ihe niile dị n'ụwa nwere àgwà ọma na ihe ọjọọ - ihe ndị a na-akpọ ezughị okè. Ma, na-atụle ụdị osisi apụl ndị dị otú ahụ dị ka columnar, ọ bara uru ịṅa ntị n'eziokwu bụ na dịka a kpọrọ ezighi ezi na ụdị osisi apụl na mba. Na mgbakwunye na obere nwa, dịka mkpa a chọrọ iji nweta fatịlaịza dị elu, ma n'oge ịgha mkpụrụ na nlekọta ọzọ, na mkpa a na-apụghị ịgbagha agbagha maka nlekọta anya.
Ọ na-atọ ụtọ ịgụ banyere apụl maka Siberia.
Osisi nile, nke kachasi nkpuru, chọrọ ịhụnanya na nlekọta. Ọ dị mkpa iji nlezianya na-elekọta osisi ọ bụla, na-ama ihe dị mkpa nke uto ya na mmepe ya.
Ihe kachasị mkpa maka ilekọta apple apple card kwesịrị ịgụnye ọnọdụ iwu kwesịrị ekwesị mmiri ala n'akụkụ osisikarịsịa mgbe transplant. Nke a pụtara na akpa ọnwa abụọ mgbe ha kụrụ seedlings, ọ dị mkpa iji hụ na ala gburugburu osisi dị n'akụkụ ogwe osisi ahụ adịghị akpọnwụ, na-ehicha ya mgbe ụfọdụ. Humidification mepụtara site n'ịhazi ogbugba mmiri n'ubi nke na-eto eto seedlings abụọ - ugboro atọ n'izu.
Tụkwasị na nke ahụ, iji chebe ụmụaka, osisi ndị a kụrụ n'oge na-adịbeghị anya, na-akụ ha mma tupu oyi ke uzo ogwu ma obu nke ozo juputara na sawdust, dara akwukwo ma obu ihe di omimi nke snow. Nke a agaghị emebi osisi na nnukwu frosts ma chekwaa na pests.
Tupu oyi, ya bụ na September, iji kwụsị oge na-eto eto site n'oge oyi ma mee ka osisi dị mkpa iji mee ka ọ dị ike ma kwadebe maka oyi oyi, wepu akwukwo kachasi elu.
Dị ka ndị dị otú ahụ, ọ dịghị mkpa ka a kpochaa apụl. A na-emewanye uto ha n'ụzọ dị mma na-egosi na ọ bụ alaka ụlọ ọhụrụ n'akụkụ ọ bụla nke osisi nke apị apical ha. A ga-emechachaachaachaa naanị maka ebumnuche ọcha iji gbochie okpueze osisi ahụ site n'ịgba na alaka nke alaka, nakwa ka ọ na-agbanye alaka ọzọ mgbe afọ 2-3 gasịrị, ma ọ bụrụ na e hiwere nnukwu alaka alaka.
Oge dum nke oge okpomọkụ dị mkpa nri potash phosphate nri ma mee ya kwa ọnwa. Ị nwere ike ifuo mmiri apụl ndị a na-eji urea, slurry na saltpeter, ma ọ bụ naanị n'obere nha, ka ị ghara ịgba osisi ahụ ọkụ.
N'afọ ndị mbụ mgbe ị lọchara, apple cardar, karịsịa nwanyị aga, eto ogologo, dị ka nevyzrevshaya n'ọnụ ke ini etuep freezes. Iji zere nke a, ị ghaghị iji fatịlaịza nitrogen fertilizer na oge ụfọdụ na iwepu mmiri na njedebe oge okpomọkụ.
Ọnọdụ pụrụ iche nke ịkụ mkpụrụ ya na-emetụta ọdịdị nke ịkụ osisi nke osisi apụl. Oge kachasị mma maka ịkụ mkpụrụ osisi nke apple cardar ka a na-ewere oge mgbe buds na-etobeghị ma oge na-eto eto amalitebeghị, nke a na-abụkarị mmalite oge opupu ihe ubi.
Ala maka ịkụ osisi na-eto eto ekwesighi ibu oke ma obu dara ogbenye. Mmiri maka sapling ọ bụla kwesịrị ịbụ ụdị nke iji nye nnwere onwe zuru oke na mgbọrọgwụ nke seedling. Mgbe ị na-etinye mkpụrụ osisi n'ime oghere, ikpo mgbọrọgwụ ma ọ bụ kọntaktị ha na mgbidi nke oghere akuku ekweghị. Ebe nchekwa nke seedling ga-abụrịrị n'elu ala.N'elu aka akuku olulu ha na-awụ ala ala gwuru n'oge egwu ya, weere ya 4-6 n'arọ nke humus ma ọ bụ compost, ma dabere na oge nke afọ, a na-eji mmiri na-adịghị ike nke urea na mmiri na-ekpocha ha.
Ọ gaghị abụ nnukwu ihe ị ga-eme Mmiri nke mpaghara mpaghara a na-agbanye n'ala. Usoro a ga-azọpụta mmiri n'ime ala. A na-eme ya site n'enyemaka nke ndị dị iche iche na-achịkwa - dịka ọmụmaatụ, ahịhịa, akwụkwọ nke osisi ndị ọzọ ma ọ bụ ọ bụ.
N'inye atụmatụ ndị a nile, ị nwere ike na-enweghị mgbalị ọ bụla dị iche iche ị ga-eme ka ị ghọọ ọmarịcha mara mma, na-amị mkpụrụ. Ma ihe kachasị mkpa - ọ bụrụ na ị na-elekọta osisi, ọ ga-ekele gị ngwa ngwa maka ịhụnanya na nlekọta gị.
Njirimara nke anyụ ahihia na Siberia
Kedu otu esi achọpụta ihe gbasara mmekọahụ nke ọkụkọ
Olee otú esi eto seedlings nke okooko osisi
Ntak emi cucumbers boric acid
Nchekwa ọnọdụ echere mgbe owuwe ihe ubi ruo mgbe opupu ihe ubi